Norway: Siv Jensen oo dalbatay shir aan "Caadi aheyn" oo ku saabsan lacagta Bom-ka. - NorSom News
Norway: Siv Jensen oo dalbatay shir aan “Caadi aheyn” oo ku saabsan lacagta Bom-ka.
Wasiirada maaliyada Norway, Siv Jensen ayaa xubnaha katirsan dowladeeda ka dalbatay shir “aan caadi aheyn” oo looga hadlayo lacagta jidgooyada sharciyeysan ee loo yaqaan ” Bom”.
Isbuucyadii ugu danbeeyay, waxaa magaalooyinka waaweyn lagu soo kordhiyay jidgooyooyin dhowr ah, kuwaas oo caro xoogan ku dhaliyay dadka baabuurta wato.
Siv Jensen ayaa rabta in dowlada dhexe iyo degmooyinka ay meelmariyaan lacag dheeri ah oo lagu qancinayo baabuurleyda.
Wasiirada maaliyada ayaa sheegtay inay kulan gaar ah ka dalbatay madaxda afarta xisbi ee katirsan xukuumada wadaaga ah ee Erna Solberg. Kulankaas oo ay sheegtay in looga hadlayo cabashada baabuurleyda ee lacagta “Bomka”.
Jensen ayaa sheegtay in la joogo xiligii wax la is weydiin lahaa lacagta baabuurleyda ay ku bixiyaan Bom-ka, ayna tahay in la dhageysto cabashada dadka.
Xisbiga Jensen ee Frp oo doorashooyinkii hore ku galay inay dhimi doonaan tirada Bom-ka, ayaa intii ay xukunka hayaan waxaa tiro ahaan aad usoo batay da Bomka-, iyada oo sidoo kale ay kor u kacday lacagta.
Magaaloyinka waaweyn, waxaa aad ugu soo badanaya is uruursiga dadka kasoo horjeedo arintan, iyada oo xisbiga Frp uu lumiyay taageerayaal aad u badan bilihii ugu danbeeyay.
Previous articleDaawo: Waxaan ka cararnay London, waxaana nabadgelyo u raadsanay Kismaayo-Soomaaliya.
Next articleXildh. Zakariye Xaaji: Waxaan codsaneynaa in Mahad Abiib la siiyo baasaboorka soomaaliga ah.